Home Wararka Ciidanka DFS oo wiil dhalinyaro ah ku toogtay magaalada Baraawe
Ciidanka DFS oo wiil dhalinyaro ah ku toogtay magaalada Baraawe
Wararka ka imaanaya magaalada Baraawe ayaa sheegaya in askari katirsan Ciidamada Booliska uu degmadaasi ku dilay Allaha u naxriistee Maxamed Keniya oo kamid ahaa dhalinyarada Magaalada Baraawe ee gobolka shabeellaha hoose.
Dilka ayaa waxaa uu ka dhacay xaafadda Baqdaad oo kamid ah xaafadaha Magaalada Baraawe kadib markii uu muran dhex maray Askariga iyo Wiilka dhalinyarada ah, isla markaana Askariga dilka geystay uu xiligaasi soo isticmaalayay waxyaabaha maanka dooriya.
Goobjoogayaal ayaa u sheegay warbaahinta in askari dilla geystay uu goobta ka baxsaday. Ma jiraan weli wax war ah oo ka soo baxay laamaha ammaanka degmada Baraawe.
Previous articleSaciid Deni oo looga digay in uu bilaabo booob doorasho iyadoon xal laga gaarin dhibkii ka dhacay Boosaaso
Next articleTaiwan donates US$500,000 to Somaliland to combat drought
Maamulka Puntland oo soo bandhigay cudud Ciidan oo xoogleh iyo fariin...
Maxaa ka soo baxay kulankii Farmaajo iyo Wakiilka Midowga Afrika ee...